Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Minisitry ny fizahan-tany Malahelo noho ny fahafatesan'i Songbird Jamaica
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Music • Vaovao • Tourism
Mandalo ilay mpihira Jamaikana Karen Smith
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fizahantany hafa dia misaona ny fahafatesan'ny mpihira fanta-daza, Karen Smith. Smith, izay nilalao am-polony taona maro tamin'ny naha mpihira cabaret azy manerana ny faritry ny toeram-pialantsasatra rehetra, dia nodimandry vao maraina androany.
Karen dia nanjary anaram-pianakaviana tamin'ny fizahan-tany sy ny Jamaika midadasika.
Nanjary mitovy hevitra amin'ny fialam-boly amin'ny fizahan-tany izy ary nandeha nanao fampisehoana tamin'ny hetsika maro tao amin'ity sehatra ity.
Smith dia filoha teo aloha tao amin'ny Federasionan'ny Mpilalao mozika sy ny mpiara-miasa ao Jamaika ary nahazo ny Order of Distinction teo amin'ny laharan'ny Officer.
“Ny sehatry ny fizahantany iray manontolo dia misaona ny fahafatesan'ny Karen Smith izay nitondra fipoahana mahafinaritra sy matihanina tamin'ny seho nataony. Manolotra fiononana feno ho an'ny fianakaviany, ny namany ary ny mpiara-miasa aminy aho, ”hoy ny minisitra Bartlett. "Karen dia nanjary anaram-pianakaviana tamin'ny fizahan-tany sy ny Jamaika midadasika miaraka amin'ny persona mibontsina sy ny feony miavaka," hoy ny minisitra Bartlett.
"Tena reharehako fa naman'i Karen aho, azo antoka fa izy no tandindon'ny fahasoavana, hatsaran-tarehy ary famoronana. Ny hirany dia tsy vitan'ny hoe nahafinaritra antsika maro fotsiny fa nahatonga fahatsapana fampiononana ho an'ny olona marobe amin'ny toe-javatra samihafa. Hotsaroana ihany koa izy noho ny fitarihana tsara natolony ho an'ny firahalahiana mozika, "hoy izy naneho.
Smith dia filoha teo aloha tao amin'ny Federasionan'ny Mpihira sy ny Fiombonambe ao Jamaika ary nahazo ny Order of Distinction eo amin'ny laharan'ny Officer.
“Karen dia nitovizany tamin'ny fialamboly amin'ny fizahan-tany ary nandeha niaka-tsehatra tamin'ireo hetsika marobe tao amin'ity sehatra ity. Fantatrao fa raha vao namandrika i Karen dia tsy hilamina ny fampisehoana », hoy ny talen'ny fizahan-tany, Donovan White.
Fantatra amin'ny hira ao anatin'izany ny "Paradise," "I Sought the Lord," ary "I Could Fall," Smith dia iray ampahatelon'ny tarika ihany koa, Pakage, izay nahitana ireo mpihira Gem Myers sy Patricia Edwards.